Ambatondrazaka: olona valo indray matin’ny haromontana | NewsMada
Ambatondrazaka: olona valo indray matin’ny haromontana
Faritra mena amin’ny fihanaky ny aretina haromontana ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro amin’izao fotoana izao. Olona valo indray matin’ity aretina azo amin’ny kaikitry ny alika ity ka ny dimy tao Ambatondrazaka raha tao amin’ny kaominina Bejofo kosa ny telo…
Mirongatra ny aretina haromontana ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Manaporofo izany ny antontan’isa voaray avy any an-toerana. Olona valo indray namoy ny ainy noho ity valan’aretina avy amin’ny kaikitry ny alika mpirenireny ity. Ny dimy tao amin’ny kaominina ambonivohitr’Ambatondrazaka raha tao amin’ny kaominina Bejofo kosa ny telo.
Manoloana izany, nanao fanambarana ny prefen’Ambatondrazaka, Rakotondrasoa Daniel fa hisy hetsika manokana ho famonoana ireo alika mpirenireny manerana ny tanàna izay hotontosaina ny 8 aogositra 2017 ho avy izao hiadiana amin’ny firongatry ny haromontana ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. “Mila mandray andraikitra manandrify azy ny tsirairay manoloana ny firongatry ny haromontana. Faritra mena amin’ny fihanaky ny aretina haromontana izao ny aty amin’ny faritra Alaotra Mangoro”, hoy izy.
Tsy ny any amin’ny faritra Alaotra Mangoro ihany fa na eto an-drenivohitra aza, tsikaritra fa mitombo hatrany ny isan’ireo alika mpirenireny. Tsy voafehin’ny tompony intsony ny sasany amin’izy ireny ka mirenireny eny rehetra eny, hany ka manaitra olona ny hiafarany.
Jerem-potsiny izany. Tsy misy fandraisana andraikitra matotra avy amin’ny tompon’andraikitra manoloana ireny alika mirenireny ireny.